Waa taan sheekooyinka Dhurwaayada jeclaaye: | Dayniile.com
Home Warkii Waa taan sheekooyinka Dhurwaayada jeclaaye:
Cali Yare Caliyoow, waxaa hadda kahor dardaarmay Dhurwaay, wuxuu yiri: marka leyga quusto inta eeysan nafta iga bixin, hala iisii dhaweeyo meeshii leygu aasi/ duugi lahaa.
Dhurwaagii baa sakaraaday. Caruurtiisi uu la dardarmaay ayaa u qaaday halkii ay rabeen iney ku aasaan. Markii meeshii la geeyay ayuu Dhurwaagi yiri: “meeshaan igala carara oo dhankaas Bari i geeya, hadda kahor baan godob ku galay soonahaan oo reer degganaa Waxar yar kaga qaatay’e.
Dhankii Bari bey haddana u qaadeen, misana isla sidii markii la geeyay buu yiri: “halkaan iga kaxeeya oo yaan adinkana la idinku dilin, godob baa iga taala oo wiil yar baan reer aan habeen usoo dhacay kaga qaataye, dhanka Koonfureed i geeya” Markii jiha kasta la geeyay ay noqotay meel uu cid godob uga galay, ayey carruurtiisii ku yiraahdeen: Aaboow meel aan godob kuu oolin ma jirtee, xageen ku geeynaa haddaba?
Wuxuu yiri: “Wadankaba iga saara. Intii marba dhinac loo waday oo la sii qaxinayay ayuu dhintay.
Hadda, Caliyoow, Dhanka RW Rooble, AAW, Xassan Sheekh, Shariif, Cabdikariin Guuleed, ASWJ, meel kuu fayoow oo aan godob kuu oolin ma jirin, oo mid walba horaad ugu soo galgalataye,dhanka Kheyrre iyo Dhagdheer Keliya ayaa kuu fayoobaaye, ayagina ma caawaad ku galgalatay? Waxaan ka baqayaa in meel lagu geeyo la waayo sidi Dhurwaagi
Jiha kasta leys kama qarxiyo Caliyoow.
Qore Osmaan Qanyare
Previous articleUgaaska beesha Cayr, Ugaas Xasan Ugaas Maxamed Ugaas Nuur oo mar kale ka hadlay xiisadda ka soo cusboonaatay gobollada dhexe Daawo
Next articleBooliiska caasimadda Garoowe oo soo bandhigay khamri iyo gaarigii siday oo xalay lagu qabtay saldhiga galbeed